Mojácar, toerana mahafinaritra any Almería | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Almeria, Inona no ho hita
Rehefa mijery sarintany ianao dia hitanao fa firenena kely i Espana, izany no mahavariana dia mahafinaritra rehefa mahita ny karazana tanindrazana, kolontsaina, tantara ary gastronomia ao anatiny. Ao anatin'ny vondrom-piarahamonina mizaka tenan'i Andalusia dia i Almería, tanàna taloha izay naorin'i Abderramán II, emira ary kalifa, tamin'ny 955 AD
Raha heverintsika fa nanomboka teo ka hatramin'ny 1489 dia teo am-pelatanan'ny Arabo izany dia tokony ho goavana tokoa ny harena ara-kolontsaina ao anatiny. Kolontsaina, sakafo, zaridaina ary zorony izay manomboka ny filatsahan'ny toetr'andro am-pitiavana dia azontsika atao ny mankafy. Andraso, ohatra, izahay Mojacar.
2 Inona no hatao any Mojácar
3 Morontsiraka Mojácar
Izany dia toerana fahavaratra mahafinaritra, tanàna manintona miorina amoron-tsiraka, amin'ny ambaratonga samihafa eo an-tampon'ny havoana. Toa ny a carte postaly ny trano fotsy niparitaka tamin'ny baiko iray momba ny Sierra Cabrera.
Mojácar dia lalana latsaky ny adiny iray miala ny seranam-piaramanidina Almería ary noho ny toerana afovoany tsara dia teboka tsara hanombohana fitsangatsanganana. Mikasa handany vitsivitsy ve ianao fialan-tsasatra amin'ny maha mpivady na amin'ny maha-fianakaviana? Tsara toerana i Mojácar, manomboka amin'izany tanàna taloha tsara tarehy.
Ny ivon-toerana manan-tantara dia tambajotram-pifamoivoizana izay mbola mitazona ny rivotra Moorita alohan'ny fandresen'ny Kristiana ny faritra. Manampy an'izany ireo toetra niavaka nomen'ny toerana amoron-tsiraka azy tamin'ny taonjato faha-XNUMX ka hatramin'ny faramparan'ny taonjato faha-XNUMX, vanim-potoana izay tsy maintsy niadian'ny Kristiana teto tamin'ireo jiolahin-tsambo Afrikana Tavaratra sy mpanao asa ratsy.
Ny tantaran'ny olona toy izany dia tsy fandriana raozy mihitsy Mojácar dia nanana areti-mandringana, ady, haintany ary koa vanim-potoana mandroso miaraka amin'ny fahitana volafotsy any an-tendrombohitra Almagrera. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-60 ny fifindra-monina ary tamin'izay fotoana izay dia niaiky aho fa ny razamben'ny raibe sy renibeko dia lasa nankany Arzantina toy ny mpifanila vodirindrina hafa. Tsy firenena ankehitriny i Espana tamin'ny taona XNUMX ka tsy nanana herinaratra na rano velona na telefaona i Mojácar tamin'izany fotoana izany.
Tsy nanipy hevitra izany fa afaka am-polony taona vitsivitsy dia ho fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany anatiny sy iraisam-pirenena. Saingy izao no zava-nitranga rehefa nanomboka nanolotra ireo trano efa rava ho an'ny olona te-hamerina azy ireo ny ben'ny tanàna: ny mpanao gazety, mpanakanto ary olona bohemia dia tonga nankafy tanàna mahantra nefa mbola tsara tarehy misy potika be.
Araka izany dia namiratra indray i Mojácar.
Inona no hatao any Mojácar
Eny, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mandeha mankaiza. Vohitra iray izay hita maso an-tongotra izy io ary noho izany dia mankafy ny feony, ny fomba fijeriny, ny arabeny ianao. Miaraka amin'ny sarintanin'ireo izay omena ao amin'ireo ivom-pizahantany dia manana ny làlan-kaleha ianao. Manomboka eo amin'ny loharano eo am-pototry ny tanàna ianao ary afaka mifarana amin'ny teboka fandinihana panoramic eo an-tampony.
Aiza no ahazoanao ny sarintany sy ny fampahalalana bebe kokoa? Misy ivon-toerana fampahalalana momba ny fizahan-tany eo amoron-dranomasina, eo anoloana ny Park Park ary ny iray hafa ao an-tanàna izay eo amin'ny kianja akaikin'ny tilikambo fiangonana. Raha ao anaty fiara ianao dia mampitandrina anao izany voafetra ny toerana fijanonan'ny fiara ao an-tanàna, indrindra raha mandeha amin'ny vanim-potoana avo ianao. Iray ihany ny làlana fidirana ary ianao dia afaka mahita ny toerana fijanonana lehibe tokony ho 300 metatra aorian'ny nandalovanao ny Plaza Nueva.
Ny faritra ambany amin'ny tanàna dia ny varavarana fidirana ary ny fiandohan'ny fitsangatsanganana na fitsangatsanganana. Ho fanampin'izay dia ilay faritra izay bara, kafe ary fivarotana fanomezana. Avy eto dia mianika ny lalana miakatra amin'ny havoana, mankany amin'ny tapany lehibe amin'ny tanàna, na koa tsy afaka miakatra ianao ary mijanona. Eto ambany ny Fuente de Moro ary tamin'ny fotoan'ny Moorish no fon'ny toerana.
Mbola azo sotroina ny rano ka mahazatra ny mpizahatany na ny eto an-toerana ny mameno ny tavoahanginy eto. Misy siny roa ambin'ny folo rano ary eo ambonin'izy ireo no misy takelaka misy ny tantaran'ny Mojácar. ny Vavahady tanàna na Puerta de la Almedina nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny fananganana ny Filankevitry ny tanànan'i Mojácar, ny kianja kely misy ny kafe, ny tohatra tery izay midina amin'ny Kianja Parterre, feno voninkazo sy ny Fiangonana Santa Maria, eo akaikiny, miaraka amin'ny fisehoan'ny tanjaka.
Ho hitanao koa ny sarivongan'i Mojáqueras, eo anoloan'ny vavahady fidirana am-piangonana. Tsangambato marbra izay maneho ny vehivavy Mojácar mitondra rano miaraka amin'ny akanjo fanaony mahazatra. Akaiky ny Kianja Fronton ary ny Kianja Vaovao izay kianja malalaky ny tanàna ary misokatra amin'ny zana-kafo misy bar, kafe sy fivarotana maro hafa.
Eto dia tsy azonao adinoina ilay Mirador de la Plaza Nueva, sehatra iray eo amin'ny faran'ny iray izay manome fahitana malalaky ny lohasaha mahafinaritra. Ny iray hafa dia ny Castle viewpoint na dia mila fiakarana mideza aza amin'ny lalana rarivato marobe. Fa eny, manomboka eto ianao dia afaka mahita ny morontsiraka sy ny Ranomasina Mediterane. Ireto misy ohatra, saingy ampy izay ilazana fa miaraka amin'ny sari-tananao eny an-tànana dia afaka mandeha sy mandeha ianao, manapaka ny lalana, miakatra sy midina eny rehetra eny.
Avy eo an-tanàna ihany, mandeha an-tongotra midina mandritra ny antsasak'adiny na miaraka amin'ny bus ao anaty dimy minitra fotsiny dia tonga eo amin'ny faritra amoron-tsiraka sy ny morontsiraka ary ny hotely. Mojácar Beach dia mihetsiketsika miaraka amin'ny hetsika amin'ny fahavaratra miaraka aminy trano fisakafoanana sy fisotroana ary toeram-pandihizana, amin'ny filentehan'ny masoandro.
Ny sisin-dranomasina sisa dia akaiky dia akaiky ary ny bus rehetra no ahatongavan'izy rehetra. Misy a serivisy fitateram-bahoaka mahazatra izay mandeha amin'ny làlambe amoron-tsiraka manome fidirana amin'ny torapasika fa afaka miaraka amin'izy ireo ihany koa ianao amin'ny fandehanana an-tongotra. Misy Tendrombohitra Marina de la Torre, La Rumina, Del Uncharger, Palmeral, Piedra Villazar, Vista de los Ángeles, Cantal, Cueva del Lobo, Las Ventanicas na Venta del Bancal, ohatra.
Izy rehetra dia samy manolotra toerana, masoandro, ranomasina, fanatanjahantena rano… Raha tianao ny manazatra ny fitsangatsanganan'ny rivotra na ny sidina fitsangantsanganana dia ny morontsiraka La Rumina sy El Palmeral any avaratra no tsara indrindra. Ho an'ny torapasika mangina kokoa ary tsy misy fivoarana firy dia afaka milahatra amin'ireo Discharger sy Piedra Villazar ianao. La del Cantal dia malaza be ary manana bara amoron-dranomasina maro, ohatra, na dia mahazatra aza izy io.
Te hanana morontsiraka saika voafafa amin'ny sari-tany fizahantany ve ianao? morontsiraka miboridana? Avy eo dia tsy maintsy mankany amin'ny Castillo de Macenas morontsiraka, ny morontsiraka Sombrerico na ny morontsiraka Granatilla. Izy ireo dia morontsiraka miorina eo am-pototry ny Sierra Cabrera, volkano, tsy misy serivisy marobe nefa noho izany antony mangina tokoa. Tantara kely sy tantaram-pirazanana tsara voaravaka fomba fijery mahafinaritra sy torapasika mahafinaritra, azonao atao ny manao ity fahavaratra 2017 ity ho fahavaratra mahafinaritra, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Almeria » Mojácar, toerana mahafinaritra any Almería
Ny Casa Botines an'i Gaudí dia hisokatra voalohany amin'ny volana aprily